တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း တာယာ စက်ရုံ(ရွာမ)သို့ သွားရောက်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၀ ဇွန် ၂၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း တာယာ စက်ရုံ(ရွာမ)သို့ သွားရောက်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး(ရုပ်သံသတင်း)
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း တာယာ စက်ရုံ(ရွာမ)သို့ သွားရောက်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝအသင်းချုပ်(YMBA)၏ ရာသက်ပန်ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝအသင်းချုပ်(YMBA)သို့သွားရောက်၍ အသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲထွန်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများအားတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (ရုပ်သံသတင်း)
ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများ၏ သတ္တမအကြိမ် မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပ
အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးစီး၍ တပ်မတော်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဆိုင်ရာ ပဉ္စမအကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ(ရုပ်သံသတင်း)
ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Udon Thani ခရိုင်ရှိ Wat Bodhisomphon ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြည်ညိုပြီး ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အလုပ်သဘောတည်ခင်း ဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်(ရုပ်သံသတင်း)
မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ Mr. Xi Jinping နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Irkutsk Aviation Plant နှင့် Irkutsk မြို့အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာ (ရုပ်သံသတင်း)
ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ Admin 0